Ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny olombelona
" Ary Ilay Anjelin’i Jehovah niseho taminy teo anaty lelafo teo amin’ ny roimemy anankiray ; dia nijery izy, ka, indro, nirehitra afo ny roimemy, kanefa tsy nahalevonana. " Eks.3:2.
Ny Zoma 20 Martsa 1896 dia nifoha vao maraina tamin'ny telo ora sy sasany teo aho. Teo am-panoratana momba ny ao amin'ny Jaona toko faha-15 aho no injay tsapako nisy fiadanana nameno ahy. Toa nameno ilay efitra iray manontolo ny rivo-piainan'ny lanitra. Toa nisy Fanatrehana masina, mendri-kaja, tao an-tranoko. Napetrako ny peniko ary niandry aho hahitako izay holazain'ny Fanahy amiko. Tsy nahita olona aho. Tsy nisy feo reko, saingy toa nisy Mpiambina avy any an-danitra nanakaiky ahy teo anilako teo ; tsapako fa teo ambany fanatrehan'i Jesosy aho.
Tsy haiko hazavaina na faritana ilay fiadanana mahafinaritra sy ilay fahazavana izay toa nameno ny efitranoko. Nisy rivo-piainana masina sy mendri-kaja nanodidina ahy, ary dia naseho tamiko tao an-tsaiko sy tamin'ny fahazoako azy ny momba izay tena zava-dehibe tokoa sy tena manan-danja. Nisy sori-dalana nivelatra teo anoloako, toy ny hoe niresaka tamiko ilay Mpanatrika tsy hita maso. Toa very tao an-tsaiko ilay hevitra efa voasoratro, ary hevitra iray hafa mazava tsara no nivelatra teo anoloako. Toa azon-tahotra lehibe aho raha nalatsaka tao an-tsaiko ireo hevitra ireo.
Nifoha maraina be aho ny Alakamisy, tamin'ny roa ora teo, ary raha rafitra nanoratra mikasika ny lohahevitra "ilay tena Voalobaka" teo aho dia tsapako toa nisy Fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny efitranoko, toy ny efa mpitranga amiko matetika hatramin'izay, ary dia very tao an-tsaiko ireo hevitra efa naha-vonona ahy teo. Toy ny hoe nanatrika ahy teo i Jesosy. Nambarany ahy izay zavatra tokony ho fantatro sy hataoko. Tsotra sy mazava ny zavatra rehetra ka tsy afaka ny tsy ho takatro ny heviny.